Statia further opens up its borders | St. Eustatius
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » St Eustatius » IStatia iyaqhubeka nokuvula imida yayo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeCaribbean • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • St Eustatius • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel
IStatia iyaqhubeka nokuvula imida yayo
Ngamana 1, 2021
ISt. Eustatius izakuqhubeka nokuvula imida yayo ngeCawa, nge-9 kaMeyi, ngo-2021
Bonke abahambi abangenayo kufuneka bagonywe ngokupheleleyo
Iindwendwe ezingagonywanga ngokupheleleyo kufuneka ziye kugcinwa zodwa iintsuku ezilishumi
Inqanaba lesithathu lemephu yendlela liya kuqala xa i-50% yabemi base-St Eustatius begonyiwe
IQumrhu loLuntu iSt. Eustatius liza kuqhubeka nokuvula imida yalo ngeCawa, nge-9 kaMayth, 2021 ngokwazisa isigaba sesibini semephu yendlela. Ukusukela ngalo mhla amalungu osapho lwabahlali kunye nabantu baseStatian abafuna ukubuyela ekhaya banokungena kwesi siqithi. Kwakhona, iindwendwe ezivela eCuraçao, Aruba, eSt. Maarten, eBonaire naseSaba zamkelwe eStatia. Imeko ekuphela kwayo kukuba bonke abahambi abangenayo kufuneka bagonywe ngokupheleleyo.
Wonke umntu unokutyelela iStatia kodwa kufuneka aye kugwetywa yedwa iintsuku ezili-10 ukuba akagonywanga ngokupheleleyo.
Inqanaba lesithathu lemephu yendlela ayinayo umhla wokuqala kodwa iya kuqala xa i-50% yabemi base-St Eustatius begonyiwe. Xa oku kufikelelwe, iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo zinokuza eStatia ngaphandle kwesinyanzelo sokuvalelwa kangangeentsuku ezili-10. Ukuza kuthi ga ngoku ngabantu abangama-879 bebonke (eyi-37%) abafumene idosi yesitofu sokugonya seModerna.
Kwisigaba sesine wonke umntu angangena kwesi siqithi, engazigonyanga iindwendwe, ngaphandle kwesidingo sokuya yedwa. Umqathango kukuba uninzi lwabahlali baseStatia kufuneka bagonywe, eyi-80%.
Ukuncitshiswa kwamanyathelo kwaqala ngo-Epreli 11, 2021 eyayiyinxalenye yokuqala yemephu yendlela yokuvulwa kwesiqithi. Ukusukela ngalo mhla, abahlali baseStatian abagonywe ngokupheleleyo akufuneki baphinde bangene bodwa xa bengena eStatia emva kokuya phesheya.
Isigqibo sokwenza lula ngakumbi amanyathelo sithathiwe emva kokucingisisa ngononophelo kwaye kuphela emva kokudibana namaqabane aphambili abandakanyekayo. Aba yi-Ofisi yoMphathiswa Wezempilo, Intlalontle kunye neMidlalo eNetherlands (VWS), iZiko leSizwe lezeMpilo kunye neNdalo (i-RIVM), iSebe lezeMpilo likaRhulumente kunye neqela loLawulo lweCrisis eStatia.